Klopp oo ka hadlay dhacdada goolkii Rashford, Muxuuse ka yiri qaab ciyaareedka Man United? – Gool FM
(Manchester) 20 Oct 2019. Tababaraha kooxda Liverpool Jürgen Klopp ayaa rumeysan in goolkii Man United kulankii adkaa ee ka dhacay maqribnimadan garoonka Old Traffrod inuu yahay mid muujinaya dhibaatooyinka haysta aalada garsoorka caawisa ee VAR.
Kooaha Man United iyo Liverpool ayaa dhibacaha ku kala qeybsaday garoonka Old Trafford, kaddib markii ay ku kala bexeen barbaro 1-1 ah kulankoodii 9-aad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Laakiin wuxuu maran dhanka garsoorka uu ka dhashay goolkii uu Manchester United u dhaliyay Marcus Rashford, iyadoo marka dib loogu soo celiyay kaamirooyinka la arkayay qalad uu daafaca United-ka ee Victor Lindelof ku sameeyay weeraryahanka Liverpool Divock Origi kahor inta uusan goolka imaanin.
Haddaba Jürgen Klopp ayaa ciyaarta kaddib wuxuu ka soo muuqday saxaafada isagoo sheegay:
“Waa natiijo fiican, laakiin ma aheyd midii aan dooneynay kahor ciyaarta, balse sida aan horumarka u sameynay ayaa inaga farxineysa, waxaan helnay hal dhibic, kaddib mudo fog ay hogaaminayeen ciyaarta, waxaa jiray waqtiyo wanaagsan ee qeybta labaad ciyaarta ah, mana jecleysan wixii ka dhacay qeybta hore ee dheesha”.
“Waxaan siinay Manchester United fursadihii ay rabeen, waxaana ka yeelnay inay noqdaan kuwo si xoogan u dagaalama, way naga fiicnaayeen oo si wanaagsan ayey u difaacdeen ugu dambeyntiina waxay naga dhaliyeen gool qeexaya Virus-ka aalada garsoorka caawisa ee VAR, waxaan dhalinay gool waana la diiday intaas kaddib, wax walba way naga soo horjeedeen maanta, laakiin ma guuldareysanin oo waxaan helnay hal dhibac aan u qalanay 100%”.